ကိုဗစ်ပေါ့စတစ် ဖြစ်လို့ Quarantine ဝင်နေရတဲ့ မိခင်အတွက် စိတ်ပူနေတဲ့ အဆိုတော် ခင်ဘုဏ်း – Myanmar
ကိုဗစ်ပေါ့စတစ် ဖြစ်လို့ Quarantine ဝင်နေရတဲ့ မိခင်အတွက် စိတ်ပူနေတဲ့ အဆိုတော် ခင်ဘုဏ်း
September 16, 2020 admin Cele, Story 0
တေးသံရှင် အဆိုတော် ခင်ဘုဏ်းရဲ. မိခင်ဟာ မမျှော်လင့်ပဲ Covid Positive ဖြစ်တာမို့ ရိုးမရိပ်သာမှာ Quarantine ဝင်နေရပြီး မိသားစုနဲ့ တကွဲတပြားဖြစ်နေတာမို့ စိုးရိမ်မိကြောင်း အဆိုတော် ခင်ဘုဏ်းက သူမရဲ. ဖေ့စ်ဘုခ် စာမျက်နှာမှာ အခုလို ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
ခင်ဘုဏ်း အမေ ၇၂နှစ် က မမျှော်လင့်ပဲ Covid positive ဖြစ်လို့ ရိုးမအိမ်ယာ မှာ ရောက်နေပါတယ် 😢😢 လူနာထားဖို့ မသင့်တော်တဲ့နေရာမှာ လူနာတွေ စု ထားပြီး ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက် မှုလည်းမရှိပါဘူး။ အမေက အသက်ရှုမဝတတ်သူမို့ ပြတင်းပေါက်ဘေးနားမှာ တံခါးဖွင့်ပြီးအိပ်နေရတယ်။ တစ်ကယ်ဆို အခြေအနေ မဆိုးတဲ့ Positive ဖြစ်တဲ့သူတွေ Hotel Quarantine ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Home Quarantine ပဲဖြစ်ဖြစ် Positive တွေအတွက် Center လုပ်ပြီးထားလိုက် သင့်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် တကယ်အခြေအနေဆိုးပြီးလိုအပ်တဲ့သူတွေကို ပိုပြီးအပြည့်အဝ စောင့်ရှောက် မှုပေးနိုင်မှာပါ။ အခြေအနေဆိုးရင်တော့ ဘယ်မှာပဲရောက်ရောက်ဆေးရုံပို့ပေါ့။ လူတွေအများကြီး ကို တာဝန်ယူတာကို တကယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙏 ခက်ခဲမှာလည်း နားလည်ပါတယ်။ လူအများကြီး ကို ကျွေးရတာမို့ အခက်အခဲဖြစ်တာလည်း နားလည်ပါတယ်။ ညနေလေးနာရီထိ နေ့လည်စာထမင်းရောက် မလာတာ ကတော့ လူနာအတွက် အဆင် မပြေလှပါဘူး။
အမေက ဆီးချိုရောဂါ အခံရှိတဲ့ သူမို့ စိတ်ပူရတဲ့အထဲ ထမင်းချိန်မမှန်၊ ဆေးတိုက် မယ့်သူ အဖျားတိုင်းပေးမယ့်သူတောင်မရှိ၊ နေရတာ နေရာထိုင်ခင်းအဆင်မပြေနဲ့မို့ ရောဂါထပ်ရမှာလည်း စိတ်ပူရ၊ လေစိမ်းတွေမိပြီး ဖျားမှာလည်းပူရ၊ အစာအချိန်မှန်မှန် မပို့လို့ အစားမဝင်ရင် ဆီးချိုကျပြီး ဒုက္ခများပါတော့မယ် အမေ အသက်၇၀ ကျော်ကို အဝေးကနေပြီး စိတ်တွေပူရလွန်းလို့ ကျမအိပ်လို့တောင်မရဘူး 😞 သေချာစဉ်းစားပြီး အကောင်းဆုံး အချိန်မှီ ပြင်ဆင်ကြပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ် 🙏 ​ကျမ ရင်တွေနာနေရပါပြီ 😢 ေရာဂါအခံရှိတဲ့ အသက် ၇၂နှစ် ကျမ အမေ ကို တစ်နေရာ ပြောင်းပေးကြပါတော့ 🙏🙏🙏
PS. ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ပရဟိတ သမားတွေ စေတနာအပြည့်နဲ့ ပင်ပန်းကြမယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ် လေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙏ကျမ အမေ အို ကိုဆေးရုံ မှာလို စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာ ထားမှ စိတ်ချ အဆင်ပြေမှာမို့ပါ
***ကျမ က လည်းအဝေးကြီးမှာ နေရပြီး အိမ်ကလူတွေကလည်း Qဝင်နေရတာမို့ ပါ***
တေးသံရှင် ခင်ဘုဏ်းက အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ အခြေချနေထိုင်နေတာဖြစ်ပေမဲ့ မိခင်ဆီ အပြေးလာချင်သော်လည်း လက်ရှိမှာ ကမ္ဘာကပ်ရောဂါ Covid-19 ရောဂါကြောင့် ပြည်ပမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ချက်ချင်းပြန်လာဖို့ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတာကြောင့် ဝေဒနာခံစားနေရပြီး အဆင်မပြေမှုတွေများစွာကြုံတွေ့နေရတဲ့ မိခင်ကြီးအတွက် အလွန်ပင် စိုးရိမ်နေတာပါ။
ဆိုင်းသမားဘဝတည်းက ဗေလုဝရဲ့ ကျေးဇူးတွေရှိခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်း ပြောလာတဲ့ ဒိန်းဒေါင်